Global Voices teny Malagasy · 10 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 10 Oktobra 2018
Ny Tontolon'ny Bilaogy Kenyana Amin'ity Herinandro Ity
Afrika Mainty10 Oktobra 2018
Manana fandalinana mahaliana mikasika ny zava-mitranga ao Amerika i Sidaki ary manao tsoakevitra fa anisan'ireo zavatra mampisalasala ny Amerikanina ny andraisana azy eo amin'ny taniny i Christopher Murungaru, izay vao volana vitsy monja ihany koa izay no nampahafantarin'ny fanjakana Britanika fa tsy tiany handoto ny varavarany.
Faly izahay manambara fa nanatevin-daharana ny Global Voices ho Tale Mpanatanteraka i Ivan Sigal. Tonga eto amintsika i Ivan avy ao amin'ny Ivon-toerana Amerikanina momba ny Fandriampahalemana , toerana izay nanaovany fikarohana momba ny fampahalalam-baovaon'olo-tsotra tao amin'ireo faritra an'ady manerantany.
Azerbaijan10 Oktobra 2018
Nolavin'i Hong Kong ny visa an'ireo tonian-dahatsoratry Financial Times izay nanatontosa valan-dresaky ny mpomba ny fahaleovantena
Nandà ny hanavao ny visa ho an'ny filoha lefitry ny klioban'ny gazety vahiny, Victor Mallet, sady tonian-dahatsoratry ny Financial Times ao Azia ihany koa i Hong Kong. Niteraka fanomezan-tsiny avy amin'ireo fikambanana samihafa izany.
Japana: Misedra olana ny tolona Sumo
Volana vitsivitsy henjana teo amin'ny tontolon'ny tolona sumo, "fanatanjahatena nasionaly" Japoney. Voalohany, niverina tao amin'ny tanindrazany ilay mpitolona Mongoliana, Asashoryu, iray amin'ny yokozuna (kilasy ambony indrindra amin'ny tolona) mba ho tsaboina noho ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny fanakianana fa tsy nahavita ny adidiny izy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Oktobra 2018
Lohahevitra maro samihafa no nasongadina tamin'ny herinandro, tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Hatomboko amin'ny Farid sy ny antontan'isany mahaliana momba ny fitoraham-blaogy any Maraoka. Avy eo i Reda izay nahita, noho i Shimon Peres, fa misy fifandraisana misy eo amin'ny hakamoana sy ny finoana silamo
Madagasikara: Nandrahona ny fifidianana hoavy ny fikasana hanongam-panjakana
Tantara tamin'ny taona 2006, nanaovan'ny Jeneraly Fidy fanambarana tao amin'ny Toby BANI Ivato, Voatery niova lalana ny zotram-piaramanidina nandehanan'ny Filoha Ravalomanana tamin'izany fotoana izany raha nandeha tany ivelany hitodi-doha an-tanindrazana izy.
Fifidianana tao Somaliland
Raha toa ka saika miatrika fahasarotana avokoa ny ankamaroan'ny toerana ao Somalia, i Somaliland kosa dia nahavita tena tsara ary hiatrika ny fifidianana demoktratikany voalohany tsy ho ela.